सिर्जना चोरीको विषय अहिले मात्र आएको होइन । धेरै अगाडिदेखि नै यस्ता विषयले प्रवेश पाइसकेको कुरा थाहा पाइन्छ । इतिहासकार नयराज पन्त यो समस्याबाट कत्ति पीडित हुनुहुँदोरहेछ । एक प्रसङ्गमा उहाँ भन्नु भएको थियो ‘...हेर्नुहोस्, यहाँ केही पनि अन्वेषण हुँदैन । अन्वेषण गर्ने भनिएका डा.डिल्लीरमण रेग्मीको काम चोर्ने छ । अन्वेषण गरेँ भन्दै उनले अरूले अन्वेषण गरेको कुरा चोर्ने गरेको प्रमाण मसँग छ । म अदालतसम्म गएर उनले चोरेको भनेर सिद्ध गर्न सक्छु । चोरलाई विद्वान् भन्ने ठाउँमा के को अन्वेषण होस् नि ? ...खेती गर्नेको बाली अरूले काटेर लान्छ भने किन खेती लाउने ? ...बालचन्द्र शर्मा, सूर्य विक्रम ज्ञवाली र डा. डिल्लीरमण रेग्मी अरूले अन्वेषण गरेको तथ्य आफूले पत्ता लगाएको भनी हिँड्ने र छाप्नेहरू हुन्’ भन्दै ‘चोरीबाट पीडित र आक्रोशित इतिहासकार नयराज पन्त’ शीर्षकमा तोया गौतमले लिएको अन्तर्वार्तामा (२०४६ साल जेठ २१ गतेको गोरखापत्र शनिबारको परिशिष्टाङ्कमा) उहाँले यो तथ्य उद्घाटन गर्नु भएको हो ।
इतिहासकै कुरा गर्दा ज्ञानमणि नेपालको अर्काे सन्दर्भ पनि डा.रेग्मीकै प्रति लक्षित देखिन्छ । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले तयार पारेको नेपाल निरुक्त नामक नेपाली ग्रन्थका कतिपय घटना सन्दर्भलाई अर्का इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ डा. डिल्लीरमण रेग्मीले अङ्ग्रेजीमा सारेर एन्स्येन्ट इन्स्कृप्सन्स् अफ नेपाल नाम दिएर प्रकाशित गरेको कुरा स्वयं ज्ञानमणि नेपालले (अतीतका स्मृति र अनुभूति पृ.१८३) नामक आफ्नो पुस्तकमा बताउनु भएको छ । उहाँको कथन छ –‘...मैले नेपालीमा लेखेको थिएँ, उनले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरे । अभिलेख खोज्न पनि, पढ्न पनि उनले परिश्रम गर्नु परेन । .....अब यसको उजुरी कहाँ गर्ने, कसलाई
वरिष्ठ साहित्यकार स्व.शङ्कर लामिछानेलाई कुमुदिनी नाम गरेकी एक छद्मनामी पाठकले चोरीको आरोप लगाएर लेखेको पत्रले झण्डै झण्डै उहाँको साहित्यक मत्यु नै भयो भन्दा पनि हुन्छ । उहाँको एक रचनालाई चोरीको आरोप लगाएर कुमुदिनीको पत्र प्रकाशित भएपछि लामिछानेले (रूपरेखा १३६) मा पठाएको प्रतिक्रिया अत्यन्त मर्मस्पर्शी र एक महान् स्वीकारोक्तिका रूपमा नेपाली साहित्यिक क्षेत्रले ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ । शङ्कर लामिछानेले सो पत्रमा लेख्नुभएको थियो –‘....यस पाँच वर्षभित्र उसले चार पाँचवटा विश्वको महान् इतिहास र लेखनशैली समेत चोरेको छ । कारण हो उसको जागीर थिएन र उसलाई बाँच्नु थियो । तपाईले एउटा मात्र पाउनु भयो, बाँच्नका निम्ति मैले त त्यस्ता पाँच छ वटा बदमासी गरेको छु । बाँँच्नुजस्तो ठूलो कुरा जीवनमा अरू केही रहेनछ । मैले कसैलाई मारिनँ, त्यो मेरो भाग्य हो । म शायद साहित्यिक क्षेत्रबाट सन्यास लिँदैछु र अब म लेख्ने पनि छैन होला । ...कुमुदिनी बहिनी नेपाली साहित्यलाई तपाईंजस्तो पाठकको जागरूकताको आवश्यकता छ, यो भएन भने मजस्ता मानिसले बीचबीचमा बदमासी गर्ने सम्भावना हुन्छ । ’ यसरी उहाँले चोरेको स्वीकार्दै प्रतिउत्तर स्वरूप यस्तो भावुक पत्र कुमुदिनीलाई लेख्नु भएको थियो । कुमुदिनीको छद्मनामबाट लेख्ने यी महिला (?) को हुन् ? अहिलेसम्म अज्ञात छ ।
यस सम्बन्धमा प्रकाशक संस्थाहरूको चर्चा गर्नु पनि केही प्रासङ्गिक ठहर्ला । महìवपूर्ण कहलिएका केही प्रकाशक संस्थाहरूले समेत सर्जकका पाण्डुलिपिमाथि अन्याय गरिरहेका घटनाहरू सुन्नमा आइरहन्छन् । उनीहरूले समयमा सर्जकका पुस्तक नछापिदिने धेरै समयसम्म धाउँदा पनि नछापिएपछि उ त्यहाँ जानै छाड्छ । केही कालपछि त सर्जकले पनि कि त बिर्सन्छ कि त उसको निधनै भइसक्छ । यो अवस्थामा त्यो पाण्डुलिपिले अर्कै रूप, आकार मात्र लिदैन, लेखकको नामसमेत परिवर्तित भएर प्रकाशित हुने गरेका दुखद स्थिति पनि हामीले सुनिरहनु परेको छ । नक्कलै गर्दा पनि सन्दर्भ सामग्रीमा सो कृतिलाई उल्लेखसम्म गरिदिए त हुन्थ्यो जसले गर्दा अलिकति सान्त्वना त मिल्दथ्यो तर त्यो पनि नगर्ने परिस्थिति छ । अनि यसलाई चोरी नभनेर के भन्ने ? शायद त्यसैले इतिहासविद् तथा अन्वेषक डा.महेशराज पन्त विमल आचार्यसँगको कुराकानीमा (नागरिक दैनिक २९ साउन २०४७) यसरी आफ्नो पीडाबोध गर्नुहुन्छ ‘...सजिलोका नाममा विनास्रोत, विनापादटिप्पणी लेख्नुहुन्न । .....सन्दर्भस्रोत सामग्री छिपाएर, लुकाएर लेख्नु बेइमानी र चोरी हो । चोरी चोरी नै हो, बौद्धिक चोरी भन्ने भए आर्थिक, भौतिक चोरी पनि भन्नु पर्छ । स्रोत नखोल्नु अशास्त्रीय काम हो । सबै आफैँले जानेजस्तो गरी लेख्नु पाठकको अपमान गर्नु हो । ’
त्यसो त नेपाली सङ्गीतबाट भारतीय सङ्गीतकारहरू समेत प्रभावित नभएका होइनन् । वरिष्ठ सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेउन, त्यो तारा मात्र होइन, जून पनि झारिदिउँला’ नामक अरुणा लामा र रुद्रमणि गुरुङले गाएको कालजयी गीतको ट्यून चोरेर हिन्दी गीतका सुप्रख्यात कम्पोजर आर.डी.वर्मनले तिसरी मञ्जिल फिल्ममा ‘दिवाना मुझसा नही इस अम्बरके निचे, आगे है कातिल मेरा और मै पिछे पिछे...’.भन्दै मोहम्मद रफीले यो गीत गाउन पुग्छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर स्व.अम्बर गुरुङले एक सार्वजनिक समारोहमा हाँसी–हाँसी भनेका छन् ‘...भारतको कलकत्तामा यो गीत रेकर्ड गरिएको थियो । त्यही समयमै यो गीत आर.डी.वर्मनले चोरेछ । त्यो गीत सुन्दा त म छक्कै परेँ । ’ आर.डी.वर्मनले त्यतिखेर आफू उनबाट प्रभावित भएको कुरालाई अस्वीकार गरे पनि उनको निधन पछि निकालेको द म्यान एण्ड म्यूजिक नामक पुस्तकमा भने अम्बर गुरुङको ट्यून लिएको कुरा स्वीकारेका छन् । त्यस्तै अर्काे नेपाली गीत ‘मुसुमुसु हाँसिदेउन लै लै, मुसुमुुसु हाँसिदेउ न’ नामक गीतको धूनले हिन्दी जगत्मा चर्चा र प्रसिद्धि कमाइसकेको छ ।
प्रभाव पर्नु र हुबहु नक्कलै गर्नु दुई छुट्टा छुट्टै कुराहरू हुन् । अतः यस विवादमा परिरहनु आवश्यक देखिँदैन । जब जस्ताको तस्तै नक्कल गरिन्छ त्यसलाई चोरी नै मानिन्छ । यसरी चोरी गरिएको सामग्री सत्य तथ्यका प्रमाणका साथ कसैले उद्घाटित गरी न्याय पाउनका लागि याचना गरेको खण्डमा त्यसलाई नियमानुसार दण्डित गरिने परिपाटीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा सिर्जना चोरीका घटनामा निश्चय नै कमी आउने थियो । यसबाट सर्जकका अधिकार अझ सुनिश्चित भएर निर्भयका साथ सिर्जना कर्ममा उनीहरू दत्तचित्त हुन सक्ने थिए । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन प्रमुख प्राथ�